Ukubukeka okuyingqayizivele enhliziyweni ye-Istanbul - I-Airbnb
Ukubukeka okuyingqayizivele enhliziyweni ye-Istanbul
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Roza & Chiko
U-Roza & Chiko Ungumbungazi ovelele
Ifulethi liseduze ne-Galata Tower okungenye yezimpawu zomlando ezidume kakhulu e-Istanbul. Iphakathi kwezindawo zendawo nezinye izindawo zokuvakasha futhi yimizuzu engu-3 kude neziteshi zezitimela nezamabhasi lapho ungaphinde uhambise khona isikhala. Kukhona amathilomu amaningi e-boutique azungeze lapho ungathola khona ikhofi - isidlo sasekuseni (esisanda kuvulwa ngaphansi kwesakhiwo maqondana nesitolo esikhulu) Indawo esophahleni enokubukeka okuhlaba umxhwele ingasetshenziswa ukuze uthathe isidlo sakho sasekuseni noma ubambe isiphuzo ebusuku.
Leli flethi lingesinye sebhilidi elinesimo esihle kakhulu esimelela i-Galata. Sichaze ingxenye yezitini ukuze sixhume isitayela esidala sangempela nesimanje. I-flat ihlose ukunikeza ukuhlala okunethezekile okucabanga ngazo zonke izidingo zesivakashi. Kumamatheka ebusweni bakho lapho uqala ukungena futhi kukwenza uzizwe usekhaya lakho.
Kunamakamelo angu-2 efulethini (ikamelo lokulala elilodwa negumbi lokuphumula elilodwa);
- 1 Ikamelo lokulala (1 umbhede olala abantu ababili ekamelweni)
- Igumbi lokuphumula eliyi-1 (usofa owodwa ungadluliselwa embhedeni olala abantu ababili)
-Kukhona ne-balcony encane yangasese efulethini lapho ungaphumula khona, ube nekhofi..
-Lokhu okuyisicaba kungcono kakhulu kubantu abashadile futhi kunethezekile eqenjini labantu
abangu-4 -Uma ungaphezu kwabantu abangu-4 nginelinye ifulethi esakhiweni esifanayo futhi ungabhukha bobabili. Omunye uphinde ufakwe ku-akhawunti yami ye-Airbnb
Ifulethi alihlotshisiwe ngefenisha yesibili yesandla nezinto, ngakho-ke inhlanzeko enkulu. Yonke ifenisha nezinto zisanda kuthengwa ezinkampanini zefenisha ezinekhwalithi ephakeme- Ekulungisweni kwefulethi siphinde sasebenzisa amashidi ekhwalithi ephezulu, imicamelo, namathawula.
Ifulethi linemishini yendlu kuhlanganise nefriji, i-AC, umshini wokuwasha, uhhavini, umshini wokomisa izinwele, iketela njll ukuze wenze ukuhlala kwakho kube lula.
I-inthanethi ye-Wi-fi esheshayo engenantambo iyahlinzekwa.
Kukhona neminye imininingwane efana namabalazwe, izincwadi zokuhamba ezingaba lula ukuthola indawo kalula endaweni eyisicaba.
* * * Kunethala elimangalisayo elisophahleni elinombono omangalisayo ongakwazi ukukutholela isidlo sakho sasekuseni noma ubambe isiphuzo ebusuku(ithala lingasetshenziswa kuze kube ngu-23:00)
Ngingakwazi ukufingqa ibanga elifushane lokuhanjwa ngezinyawo ukusuka endaweni eyisicaba kuya ezindaweni eziyinhloko ezilandelayo;
* * * Istiklal Avenue (3 imiz)
* * * I-Taksim Square (imizuzu engu-20)
* * * I-Goldenwagen (imizuzu engu-5)
* * * Karaköy (5 imiz)
* * Spice Bazaar (15
imiz) * * * UHagia Sophia (imizuzu engu-20)
* * * I-Grand Bazaar (imizuzu engu-25)
* * * I-Galata Bridge (imizuzu engu-10)
* * * I-Galata Tower (izinyathelo ezimbalwa kude)
Indawo eyisicaba ingenye yezindawo eziphakathi kakhulu nezaziwayo zase-Istanbul ezinendawo ephawulekayo; i-Galata Tower.
Kulula kakhulu ukufinyelela le ndawo eyaziwayo ye-apatment yami. Konke okudingayo ukucela i-Galata TOWER (E-Turkish '' GALATA Kulesi '') kunoma ubani e-Istanbul futhi ngemva kokufinyelela kulo mbhoshongo, kusho ukuthi ufike endaweni yakho eyisicaba.
Ungathatha amabhasi omphakathi bese umisa esiteshini i- '' Şişhane '', uthathe isitimela noma itekisi kusuka kokubili ezikhumulweni zezindiza e-Istanbul (e-Ataturk nase-Sabiha Gokcen).
• Ama-shuttles esikhumulo sezindiza aqhutshwa yi-Taksim Square ne-Atatürk Airport (TL 12/umuntu); futhi nge-Sabiha Gökçen Airport engabalulekile kakhulu etholakala e-Asia Side (TL 15)
Ngivame ukungena kuzo zonke izivakashi futhi ngihlala endaweni efanayo futhi ngithanda ukuchitha isikhathi sami esiningi endaweni engumakhelwane.
Indawo eyakhelene ibizwa ngokuthi i-Galata (Pera) futhi yaziwa ngokuthi inkaba yamaJuda yedolobha emuva ngesikhathi se-Ottoman nesikhathi sokuqala se-Republican
Indawo yase-Galata iyindawo engcono kakhulu futhi iyindawo yezivakashi e-Istanbul. Kunamathilomu amaningi nezindawo zokudlela endaweni futhi ngezinye izikhathi ungajabulela umculo odlalwa bukhoma kule ndawo. Indawo inomlando omude kakhulu, ivaliwe ku-Istiklal Avenue exhunywe ku-Taksim Square. Ibuye ibe sebangeni lokuhanjwa ngezinyawo ukuya kwezinye izindawo zomlando. Ungathola kalula itekisi, ibhasi lomphakathi kanye namamitha angu-100 ukuya e-Metro ne-Tram.
Ibungazwe ngu-Roza & Chiko
Izivakashi zami zingathintana nami ngokuthanda kwazo, i-SMS, Imeyili, i-WhatsApp, i-Airbnb..
URoza & Chiko Ungumbungazi ovelele